15 hours ago रोचक 0
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा …
20 hours ago रोचक 0
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ । नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य …
सपनालाई विशवास नगरेपनि कतिपय यस्ता सपनाहरु हुन्छन् जुन सपनाले निकै चिन्तित बनाउँछ । भनिन्छ सपना र ज्योतिष उस्तै हुन् । अक्सर विश्वास नगर्नेलाई सपना बकवास जस्तै लाग्छ । तर ज्योतिष शास्त्र अनुसार सपनामा कुनै पुरुषले महिलालाई चुम्बन गरेको देख्यो भने पुरुषको लागि फाइदाजनक रहेको हुन्छ । यस्तो सपना देख्ने मानिसले …
काठमाडौं। २३ वर्षकी एक युवतीलाई बच्चा जन्माउने लत लागेको छ । उनले अहिलेसम्म ११ बच्चा जन्माइसकेकी छिन् र उनी सय बच्चा जन्माउन चाहन्छिन् । रुसकी २३ वर्षकी क्रिस्टिना ओज्टर्कले अहिले नै ११ बच्चाको पालन पोषण गरिरहेकी छिन् । न्यूजफ्ल्याश मिडियासँग कुरा गर्दै क्रिस्टिनाले बताएअनुसार उनले ६ वर्ष पहिले छोरी जन्माएकी …
एजेन्सी / हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई घूरनुलाई एक अपराधको श्रेणीमा रााखिएको छ । जबकि त्यसको ठीक उल्टो प्रतिदिन महिलाहरुलाई १० मिनेट सम्म घूरी रहनु पुरुषहरुका निम्ति स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भन्ने न्यू ईङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुष यदि दिनहुँ १० मिनेट सम्म महिलाहरुको स्त नलाई घू रेर …
शाहरुख खानकी छोरी सुहानाले बनाईन् आफ्नी आमाको चित्र , भयो एकै छिनमा भाइरल
बलिउडका सुपरस्टार शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान सामाजिक सञ्जालको एक सनसनी मच्चाउने पात्र हुन् । सुहाना इन्ष्टाग्राममा एकदमै सक्रिय रहने गरेकी छिन् । कुनै न कुनै तस्बिर उनले इन्ष्टामा शेयर गरिनै रहेकी हुन्छिन् । सुहानाले यसपटक भने अलि फरक फोटो हालेकी छिन् । उनले आफैले बनाएको एउटा खास चित्र हालेकी …
इन्डियन टिभी क्षेत्रको प्रख्यात नामको अनिता हसनंदानी। उनले काभ्यान जाली, ये हे मोहबते, नागिन जस्ता सुपर हिट सिरियलमा काम गरि सकेकी छिन्। सन् २०१३ मा अभिनेता रोहित रेड्डीसँग विवाह गरेकी उनले यहि फेब्रुअरीमा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिइन्। बच्चालाई जन्म दिएसँगै उनलाई अहिलेसम्म पनि धेरै बधाई दिने गरेका छन्। अनिताका पति …
4 days ago रोचक 0
दम्पतीबीच के निहुँमा झगडा पर्छ ? धेरै दम्पतीले यसबारे चासो राखेकै हुँदैनन्। अर्थात्, आफूहरूबीच हुने झगडाको कारण वा बिउ के हो ? उनीहरूले सायदै हेक्का राख्छन्। यद्यपि झगडा भने भइरहेकै हुन्छ। मनमुटाव भइरहेको हुन्छ। भनाभन भइरहेको हुन्छ। कति दिनसम्म बोलचाल बन्द भइरहेको हुन्छ। तर, दम्पतीले फर्केर सोच्दैनन् कि हामीबीच झगडा …